Ini munguva pfupi yapfuura ndakatora mwanasikana wangu ane makore gumi nemapfumbamwe ku Justice, mutengesi wembatya dzevana. Kubva pakutanga maneja akandirova, pamaminetsi mashanu, nezvigadzirwa zvechigadzirwa uye kukwidziridzwa. Izvi zvakaenderera kwemaminetsi e5 kudzamara ndamanikidzwa kuenda kuchikoro pane ruzivo rwevatengi uye zvido.
Chirongwa chakaipa cheemail chakafanana nemunhu asingabatsiri kutengesa. Panzvimbo yekuti uverenge kusafarira pazviso zvevatengi vako, inzwa kusagadzikana pakutengesa, kana mune yangu nyaya, inzwa kuomarara kwemashoko avo; email kushambadzira inogona kukuudza chinenge zvese zvaunoda kuti uzive nezve vatengi vako uye zvinokubatsira iwe kutengesa zvimwe.
Kuenda Kupfuura "Hi FNAME"
Njere dzinodikanwa kuita kuti chirongwa chako cheemail chinyatsobatsira chatova pamatipi emunwe wako uye hachidhuri. Inouya kwauri muchimiro che data. Ini handireve kuvhura uye tinya data, kunyangwe izvo zvichizokuudza zvakawanda, ndiri kutaura nezve data iyo inobvumidza iwe kuti uenzanise ruzivo rweumwe neumwe wevatengi vako.
Chokwadi, kwaziso dzakasarudzika dzinowanzo gamuchirwa zvakanaka asi sezvandataura mune ichangopfuura Chief Marketer chinyorwa, yegore rino yakasimudzira Valentine's Day mishandirapamwe ndeaya akashandisa zvakadzama dhata, senge nhoroondo yekutenga uye mapurogiramu evatengi, kuita kuti zvavanopa zvive zvevanhu uye nekudaro zvinyatsoenderana Muchinyorwa, ini ndanga ndichitaura zvakanyanya nezvevatengesi asi makambani ebasa zvakare ane akaurayiwa einowanikwa nyore nyore data kuteedzera (kana kutofanofungidzira) chinangwa chekutenga chevatengi vavo pamwe nekuona mikana yekutengesa-uye yepamusoro-yekutengesa.
Chii Chaunofanira Kushanda Nacho?
Iwo masosi eanogona kuita data anoita kunge asingaperi, asi heano mashoma mapoka uye chaiwo mienzaniso:
Nhoroondo: Fungidzira iwe uchimhanyisa agency yekufambisa uye ini ndiri wako 65 y / o tarisiro, iwe unofunga kuti ndingazopindura zvirinani kune kupihwa kunoratidza nzvimbo dzakakurumbira dzevakuru? Zvino chimbofungidzira kuti mifananidzo iri muchipo yaive iyo yekunyengedza-vhudzi rine vhudzi. Kana pamwe ini ndiri kumadokero kwemahombekombe nguva uye yako webinar iri purogiramu ye1pm kumabvazuva, ndingangodaro ndinogona kuchengetedza chigaro changu kana iyo email ikaverenga 11am pacific?
Nhoroondo yekutenga: Kana ndikatenga zvipo mukati kana kutenderera zuva ranhasi, makore maviri akateedzana, ndingangoda kutenga imwe zvakare gore rino? Ko kana izvo zvitsva zvekurudziro zvechipo zvaienderana nezvandakambotenga zvekare zvevamwe vatengi vechipo? Zvakare, ko kana ndatotenga chako chekutanga chigadzirwa, iwe unofunga kuti ini ndoda kunzwa nezve imarii yandaigona kunge ndakachengetedza, dai ndakamirira chete? Pane kudaro, handidi ini kuda kuziva nezve zvako zvechipiri zvinopihwa?
Basa: Pamwe ndave kurodha pasi mapepa akachena matatu akateedzana mumazuva makumi matatu, asi ndisati ndatenga, chingave zano rakanaka here kundikoka munhaurirano nezvezvandinoda chaizvo? Kana kuti pamwe ini handina kupindura kune zvako zvaunopa mune imwe nguva, ndiri akakwana kune yekumutsidzira kupihwa kana kugutsikana ongororo?
Zvaunofarira: Fungidzira kuti une zvigadzirwa gumi zvakasiyana asi ini ndiri mutengesi uyo anongofarira zvigadzirwa 10-1. Ini handifanire kuiswa muchikamu pamwe nevamwe vatengesi? Ko kana ndiri mushandisi wakananga asi ini ndichingoda chete kuwana ruzivo rwekudzidzisa, zvinopesana nekusimudzira, ndinowanzo gara ndichifarira uye nekugovana ruzivo rwako kana ndikangowana izvo zvandinonyatsoda?
Zviri Nyore uye Zvisingadhuri Kuita
Ini ndinogara ndichishamisika apo vatengesi veSMB vanoti kushandisa data padanho iri ndekwevakomana vakuru chete. Izvo zvinogona kunge zvaive zvechokwadi mumakore apfuura, asi nhasi chero ESP yakakosha munyu wayo inosangana zviri nyore neCRM yako kana E-commerce mhinduro uye webhu analytics. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuzvisanganisa uye zvakanyanya kukosha kuti zviedze.
Tags: Activityeemail chiitikotsambambozha personalizationemail zvaunofariraemail nhoroondoemail kutenganhoroondo yekutenga
Kuunza Facebook Traffic Chiitiko mune YAKO Analytics
Kwete, hazvisi nyore uye zvisingadhure kubatanidza kutenga kwevatengi nezvimwewo nemaemail ekushambadzira zvirongwa. Anenge ese e-self-service ESP's haapi kana iota yekubatanidza. Iri ibasa rePOS app kana app yako yepamhepo kubatanidza uye kusunda ruzivo rwakakodzera "segmentation" muESP' kuonana.
SMB inoda chimwe chinhu chiri nyore uye chekuzvishandira.